Ho Antsika mianakavy Oloraiky aty Antsiranana - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Mgr Ramaroson Benjamin Marc , c.m. il y a 6 années
Amin’izao fotoana anoratako ity taratasy ity izao, dia mahatazana ny sary vongan’i Fo Masin’i Jesoa sy sary vongan’i Masina Maria izay mijoalajoala eo ambony katedralin’i Farafangana aho, ary fantatro fa eo ambany fiarovan’ny Fo Masin’i Jesoa koa ny Arsidiosezintsika. Ao amin’Andriamanitra tokoa dia tsy misy ny kisendrasendra fa fandaharany ny zava-drehetra mba hahasoa antsika zanany ao amin’i Jesoa. Na dia eo aza ny elanelan-tany dia miombona ao amin’ny Fo Masin’i Jesoa tokoa isika ka izao tonombavaka izao dia iarahako amin’i Masina Maria Renintsika ary iangaviako izy hitondra ity hafatra ity any amin’Ilay Zanany nanaiky hiara-monina amintsika. Hitondra Fiadanana ho antsika mianakavy anie Izy amin’izao Noely sy Taom-baovao izao.
Mihaino vavaka Andriamanitra…
Raha nametra-pialana ny Zokibe Mgr MALO Michel fotoana vitsivitsy izay, dia niara-nivavaka isika. Misaotra an’Andriamanitra aloha amin’ireo soa sesehena natobany tamin’ny alalan’ity Mpanompony ity nandritra ny taona maro. Misaotra anao Baba e! Nitebiteby isika hoe iza no hisolo azy. Nitodika tamin’Andriamanitra, nivavaka isan’andro mba homeny Mpiandry Ondry. Tsy irery isika tamin’ireny vavaka ireny fa teo ireo Zoky Misionera (Monsegnera, Mompera sy Relijiozy lehilahy sy vehivavy), ireo Mompera Diosezianina nanolotra ny ainy ho an’ity diosezy ity, ary ireo lahika nafana fo rehetra. Sambatra isika manana azy ireo. Isika izao no « dimby » ka aoka ho mendrika ny lova napetrany amintsika. Nihaino ny vavaka nataontsika Andriamanitra ka misaotra Azy. Mitalaho ny Fahasoavany hatrany isika mba ho tantanany Ilay nofidiny hahafahany mitarika sy manentana ary mankahery antsika hivelona ny finoantsika, satria tsy noho ny fahamendrehany fa noho ny fitiavany no nifidianan’ny Tompo azy.
Isika tsirairay Eveka, Pretra, Relijiozy, Lahika… no mandrafitra ny Dosezy…
Araka ilay vavaka nataontsika tokoa, dia isika tsirairay no mandrafitra ny arsidiosezy. Ny maha diosezy ny diosezy dia isika rantsambatany. Isika no Fianakavian’Andriamanitra. Mila antsika pretra hanamasina azy ny arsidiosezy amin’ny alalan’ny fiainantsika sy amin’ny fizarazarana ny sakaramenta. Mila antsika relijiozy manolo-tena marina ka tokam-pilàna ao amin’i Kristy ny diosezy mba ho vavolombelon’ny fitiavany. Mila antsika lahika vavolombelona vonon-kamonjy ny hafa ny diosezy hanambara ny herin’ny fihavanan’Andriamanitra. Mila fikambanana Masina velona mampibaribary fa manan-karem-pahasoavana ny Fiangonana ka mizarazara izany amin’ny rehetra. Hoy i Md Vincent de Paul mananatra antsika : « Raha manao ny asan’Andriamanitra isika dia Izy no hanao ny asantsika »….Mahereza àry amin’izay adidy sy andraikitra tandrify antsika tsirairay avy ary mifanohantohanà sy mifanohintohinà satria Asa iray, Fanahy iray, Eglizy iray ary Arsidiosezy iray no tompointsika…
Tohizo ny vavaka fa izany no loharanom-pahasoavana
Maro ny manontany hoe rahoviana ny fahatongavany sy ny fametrahana azy ? Manambara ny fiahiantsika ny arsidiosezy izany. Tsara ny manambara amintsika fa ny 25 Janoary 2014, Fankalazana ny Fibebahan’i Md Paoly no voafidy hanatanterahana ny Eokarisitia Fametrahana. Dien’izao aho dia manasa antsika mba samy hiomana amin’ny fandraisana izany fahasoavan-dehibe izany amin’ny alalan’ny vavaka. Mampirisika antsika àry aho hiara-hientana isan’andro : any an-tokan-trano, any an-tsekoly, any amin’ny toeram-piasana, any am-piangonana hanao ilay vavaka fitalahoana ny Fiantsoan’Andriamanitra. Mbola misy fiomanana hafa fa io vavaka io no tena zava-dehibe satria Izy
Andriamanitra no loharanom-pahasoavana.
T s y i s i k a f a n y Fahasoavan’Andriamanitra miaraka amintsika…Eto am-panoratana izany rehetra izany aho dia mitamberina ato an-tsaiko ny resaka nifanaovako tamin’ny Nonce Apostolika raha niantso ahy izy. Tsy ela akory talohan’io resaka io aho no namelabelatra momba ny « eny » nataon’i Maria raha avy nandre ny hafatry ny Anjely izy. Nampifandraisiko tamin’izay nitranga tamin’i Md Piera rehefa nahita ny Tompo nandeha teny ambony rano io « Eny » nataon’i Maria io. Rehefa niangavy ny Tompo i Piera dia nasainy hanaraka azy teny ambony rano. Nefa rehefa nandroso kely izy dia raiki-tahotra ka niantso vonjy satria nihanilentika tsikelikely izy : « vonjeo fa maty aho… ». Izany koa no teny nolazaiko tamin’i Nonce : « vonjeo fa maty aho… »… Tsapako tokoa ny havesatry ny adidy miandry ahy. Na i Piera na i Maria dia samy nahatsapa koa fa tsy mora, ary mavesatra ny iraka napetrak’Andriamanitra tamin’izy ireo… Samy mahatsapa ihany koa isika mianakavy fa tsy vitantsika samirery ny miatrika an’ity arsidiosezy ity, hahatonga azy ho Fanjakan’Andriamanitra tokoa… Eo anefa ny Tompo. Tahaka ny nataony tamin’i Maria, tahaka ny nataony tamin’i Piera no ataony amintsika ankehitriny… Aza matahotra mirosoa hatrany ary mirosoa amin’ny lalindalina kokoa… Eto anivontsika tokoa ny Tompo. Izany no ankalazaintsika amin’ny Noely. Miredondredona ny hira sy ny fihetsika litorjika anambarantsika ny finoantsika fa Tonga nofo tokoa ny Tompo. Finoana velona ny fionoantsika ka entintsika amin’ny fiainana andavanandro. Ka na dia mafy aza ny onjam-piainana vokatry ny hetraketraky ny natiora, na dia mafy aza ny fiainana avy amin’ny toetsaina efa simba ka mila fibebahana, na dia mafy aza ny fiainana avy amin’ny vidim-piainana lanja miakatra isan’andro, na dia mafy aza ny fiainana vokatry ny tsy fisian’ny fandriam-pahalemana… Eto Amintsika tokoa ny Tompo (Emanoela) mitantana ny lakam-piainantsika Izy ka feno fanantenana hatrany isika…. Tahaka an’i Maria, tahaka an’i Piera dia aoka àry hatoky Azy isika ka hilaza Aminy hoe : « Tsy izahay fa ny fahasoavan’Andrimanitra miaraka aminay” ary « Fantatray ny nametrahanay ny fitokisanay dia i Kristy ilay tsy mivadika mandrakizay ». Io no teny faneva nofidiko hanentana ny arsidiosezintsika satria efa nanentana ahy hatramin’ny voalohany: « Tsy isika fa ny Fahasoavan’Andriamanitra miaraka amintsika… » Io koa no firariana atolotro antsika mianakavy amin’izao Noely sy Taom-baovao izao… Hiaraka amintsika hatrany anie ny Fahasoavan’Ilay Tonga Nofo ka hahafahantsika mianakavy mamakivaky an’ity taona 2014 ity ka ho 365 andron-jina sy androm-pahasoavana ho antsika tsirairay ny taona 2014. Hifampivavaka hatrany isika miaraka amin’i Masina Maria Renin’i Jesoa ka hahay hanatanteraka ny sitrapony. Matoky ny Fitiavan’ny Fo Masin’i Jesoa Mpiaro ny Arsidiosezy isika.
Anio 8 Desambra 2013 ‡‡
Arseveka voatendry Antsiranana
Ireo rohy mety hahasoa :